theZOMI: Burma News International - May 6, 2013
Burma News International - May 6, 2013
RCSS/SSA: the Burma Army inciting racism
The recent report that said Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SAA) seized4Burmese people who were selling photos around along the Shweli River bank in Muse District; Northern Shan State is the government’s plan to incite racism, according toaShan local militia commander.
Myanmar's largest city is on track to becomea“mega city” by 2040, according to speakers at the Urban Development Conference in Yangon's Traders Hotel on May 6.
Representatives of the Asian Development Bank (ADB) and International Monetary Fund (IMF) on Saturday lauded the Myanmar government and encouraged it to continue its economic reforms, according to China’s Xinhua News Agency.
Several people have been killed by heavy flooding in Shan State, with at least nine corpses recovered fromagold mine in Kalaw Township which collapsed on Thursday.
မွန်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် မွန်ဘာသာရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းပါရရှိရန် ပြည်နယ်အစိုးရထံတောင်းဆို
မွန်ပြည်နယ်၊ ကမာဝက်ကျေးရွာ၌ ကျင်းပခဲ့သော ပထမအကြိမ် မွန်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ တွင် မွန်ပြည်နယ်ဒေသတွင်း မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျနေသည့်အတွက် မွန်တိုင်းရင်းသား ဘာသာဖြင့် သတင်းစာ၊ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ ရှိလာစေရန်အတွက် မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအား တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
RCSS တပ်စခန်းတခုအား အစိုးရတပ်မီးရှို့ - အောက်ခြေတပ်များမကျေနပ်၍ စစ်ရေးပြင်
လူပျောက်မှုကြောင့် တပ်စခန်းအတွင်းစစ်ဆေးခွင့်ပေးရန် အစိုးရတပ် တောင်းဆိုမှုကို RCSS/SSA က လိုက် လျော ၍ ခေတ္တရှောင်ထွက်ပေးပြီးနောက် ၎င်းတို့စခန်းအား မြန်မာစစ်တပ်သိမ်းပိုက်ကာ မီးတင်ရှို့လိုက်သောကြောင့် ရွှေလီမြစ် ဝှမ်းအခြေစိုက် RCSS အမှတ် ၇၀၁ လက်အောက်ခံ တပ်သားထုက မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ စစ်ရေး ပြင်ဆင်နေဟု ဒေသ ခံများက ပြောသည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစောင့်ကြည့်ရန် ကရင်အမျိုးသမီး KWEG ပြင်ဆင်
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာစောင့် ကြည့်နိုင်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် များတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်ရေးအတွက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့ လာမှုသင်တန်းကို ကရင်အမျိုး သမီးများဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့-KWEG က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျောက်ဖြူ မီးသတ်ကား ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများသို့ ဌားရမ်းခြင်း မဟုတ်မှန်ကြောင်း မီးသတ်ဦးစီးမှူး ငြင်းဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးသတ်ကားတွေကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ကျိုး စီးပွား အတွက် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေကို ဌားရမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ အခြေအမြစ် မရှိပါဘူးလို့ ကျောက်ဖြူ မီးသတ်ဦးစီးမှူးက ပြောပါတယ်။
ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဆန္ဒပြ၍ အရေးယူထားသော မဒေးကျွန်းသားများကို ရုံးတင်
CNPC အား ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဆန္ဒပြမှုဖြင့် မဒေးကျွန်းရဲစခန်းမှ ဧပြီ၁၈ရက်နေ့က အရေးယူထားခဲ့သူ ၁၀ ဦးအား မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် တရားရုံး၌ ရုံးတင် တရားစွဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မဒေးကျွန်းဒေသဖွံ့ ဖြိုး ရေးကော်မတီ တာဝန်ရှိသူ များက ဆိုသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း ရပ်တန့်ဖို့ မွန်ဒေသ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ တောင်းဆို
မွန်ဒေသအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းဖြင့် မွန်လူငယ်များအပေါ် ဆိုကျိုး သက်ရောက် စေမည့် လုပ်ရပ်များအား ရပ်တန့်ပေးရန် မွန်ဒေသ လူမှုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲက တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အင်းလေးကန် ရေရှည်တည်တံ့ရန်နှင့် အင်းသားပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်း ဖွဲ့စည်းမည်
ရှမ်းပြည်နယ်၏ သဘာဝအလှတခုဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖြစ်ထွန်းရာနေရာတခုဖြစ် သည့် ရေရှည်တည်တံ့စေရန်နှင့် အင်းသား ပညာရေး ဖောင်ဒေရှင်း ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ဆွေးနွေးပွဲတရပ်ကို တောင်ကြီးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်ရပ်ရှိ နဂါးပွက် ကျောင်းတိုက် တွင် မေလ ၅ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင် ယခုလ ၁၈ ရက်နေ့၌ ပညာရေး ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ ကွန်ယက် (National Network for Education Referrer) အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနား- လိုင်ဇာလမ်း ကားများ ပြန်လည်ပြေးဆွဲ
ကချင်ပြည်နယ် တရုတ်နယ်စပ် အဓိက ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတခုဖြစ်သည့် မြစ်ကြီးနား-လိုင်ဇာ လမ်းကို ဧပြီလက ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပြန်လည် ပြေးဆွဲ ခဲ့ကြရာမှ ယခု ကားဖြင့်လည်း ပြေးဆွဲလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ ညီလာခံကျင်းပ
၁၂ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပမည့် ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP) ၏ ညီလာခံကို မေလ ၆ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ် မယ်ဟောင်ဆောင် ခရိုင်ရှိ KNPP ဌာနချုပ် ညာမိုစခန်းတွင် ကျင်းပသွားမည်ဟု အတွင်းရေးမှူး (၂) ဖြစ်သူ ဦးအောင်စန်းမြင့် က ပြောပါသည်။